(Olika typer av boenden)
Iswiidhan waa dal dheer oo ay ku yaalliin magaalooyin waaweyn, kuwo yaryar iyo tuulooyin. Waxaa Stockholm iyo magaalooyinka waaweyn ka jira guryala’aan, halka ay dalka qaybihiisa kale ka jiraan guryo bannaan oo aan la degganayn.
Waxaa magaalooyinka iyo tuulooyinka ku yaal aqalo qolol badan ka kooban, fiilooyin, guryo gaagaaban oo xiriirsan, kuwaas oo ama la kireysan karo ama la iibsan karo.
Gurya-la’aanta magaalooyinka waaweyn ka jirta awgeed, waxay dad badani kireystaan guryo gacan-labaad ah ama dad kale ayey la qaybsadaan. Dad kalena waxay doortaan in ay u guuraan magaalada bannaankeeda oo ay sahal ka tahay in guri laga helo.
Waa maxay “hyresrätt”?
(Vad är en hyresrätt?)
Hyresrätt waxa weeye xaqa guri la kireysto. Hyresgäst waxa weeye qofka guri kireysta meesha hyresvärd ka yahay qofka ama shirkadda guriga kireysa. Kireystaha iyo kireeyuhu waxay qoraan heshiis kiro oo ay ku qoran yihiin arrimo ay labadooduba raacayaan.
Sida caadiga ah kireeyaha ayaa guriga ku sameeya dayactir ay ka mid yihiin ranjiyeynta iyo xaashiyaha gidaarka lagu dejiyo. Kireystuhuna waa inuu guriga xannaaneeyaa oo wixii dhaawac uu isagu sababay kharashkooda bixiyaa. Haddii guriga lagu arko cillado ay ka mid yihiin darroor waa in isla markiiba lagu wargeliyaa cidda guriga laga kireystay.
Hyresgästföreningen waxa weeye urur taageera kireystayaasha xubinta ka ah ururka. In ururka xubin laga noqdaana waa ikhtiyaari oo khasab ma aha. Qofkii xubin ka noqdaana wuxuu bixinayaa lacag khidmad ah.
Waa maxay “bostadsrätt”?
(Vad är en bostadsrätt?)
Bostadsrätt waxa weeye guryo qolol badan ka kooban, fiillo ama guryo gaagaaban. Qofka iibsada bostadsrätt wuxuu iibsaday xaqa isticmaalka guriga, wuxuuna saami ku yeelanayaa ururka iskaashatada guryaha. Dadka deggan guriga ayaa wada wadaaga lahaanshaha guriga. Waxaana la bixiyaa bil walba lacag khidmad ah oo loogu talagalay dayactirka iyo xannaanada guryaha iyo meelaha la wadaago.
Waa maxay “äganderätt”?
(Vad är en bostad med äganderätt?)
Waxaa jira guryo badan oo fiilooyin iyo guryo gaagaaban oo dad isla leeyihiin. Lahaanshahaas ayaana lagu magacaabaa äganderätt. Qofka guri ku iibsada nadaamka äganderätt wuxuu keli u noqonayaa lahaanshaha guriga.